Warmly Welcome: တစ်ဝက်အမှန်၊ ၅၀% က ဟန်
ရှေးခေတ် ဘုရင်းသားတော်တွေကိုတောင် ဒီသပါမောက်ခဆရာကြီးတွေက ဆရာစားချန်သေးတာပဲလေ ဘလော့ရေးတာလည်း ဖေါ်သင့်တာဖေါ် ဖုံးသင့်တာတော့ ဖုံးရမှာပေါ့ ယမမင်းမတရဘူး ဒါ ဘလော့ဂါတွေကို တမင်း ငွေညှစ်တာပဲ :P
အသေအချာ ရေးပြီးမန့်နေပါမှ နက်ကကျရတယ်လို့.. :(
ကိုဝင်းဇော်က ယမမင်းကြီးကို မမေးခဲ့ဘူးလား ... သူလည်းလူ့ပြည်တုန်းက ဘလော့ဂါ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ ဟိ
ကိုဝင်းဇော် ကြီးဘာတွေလုပ်ထားလည်း ဘလောဂါတွေအပေါ် ဟိး၂စတာပါ. အတွေးနဲ့အရေး ကတော့ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ. လင့်ထားတယ် ကိုဝင်းဇော် ကျေးဇူးပါ.
သည်းခံ .. သည်းခံ .. သည်းခံ
ထူးပြီး မဆန်းတဲ့ အဖြစ်လေးတွေပေါ့နော်
တရုပ်ပြည်မှာတော့ ဘလော့ လုပ်ရင် နာမည်အမှန်နဲ့ လုပ်ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်ရတယ်။ နိုင်ငံရေး လုပ်လို့ မရအောင်လို့လေ
ရေးထားတာမိုက်တယ် ..း)ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် ဂယောက်ဂယက် .. အိပ်မက်မို့တော်တော့တယ် .. စဉ်းတော့ စဉ်းစားစရာပဲ ...
ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားမရှိလို့ ဖတ်ပြီး ပြန်သွားတာ များပါတယ်။ ဒီပိုစ့်က ထိတယ်၊ မိတယ်ဗျ။ ကြိုက်၏။
အင်း ...အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့်ပဲလို့ ဖုံးကွယ်နေရတဲ့ ဘ၀တွေပါ၊ သေခြာတာကတော့ ဘ၀သေမင်းကြီး ယမမင်းထက် ဘ၀ရှင်မင်းကြီးတွေကိုလည်း ကြည့်ရသေးတယ်။
Block လုပ်တဲ့ထဲမှာ ယမမင်းများပါနေမလားမသိဘူးနော် သေချာပြန်စစ်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့ ပြီးရင် ပြန် Invite လိုက်ဒါဆို ငရဲကနေလွတ်ချင်လွတ်နိုင်တယ် :P
asl ဆိုတဲ့ အသံတွေ တခါက ကြားလိုက်ရဖူးတယ်
ကျတော်နာမည်က မိန်းကလေး ဆန်နေတာကိုး
ဟီ ဟီးး နောက်ပိုင်း လက်ခံခါနီးရင်
ဘယ်သူ့ သူငယ်ချင်းလဲ အရင် လိုက်မေးပီးမှပဲ
ယမမင်းကို ပေါင်ချိန်နဲ့တိုင်... :P
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ရိုးသားမှု၊ နားလည်မှုတွေက အဓိကကျပါတယ်...
၀င်းဇော် နင်ကစ်တာ များသွားလားဟင်?
ဒီနေရာမှာကျတော့ အမှန်အကန် ပြောလို့
ဒါပေမယ့် ဘော်ဒါ အမှန်အကန်ဆိုရင်တော့
ရှိဖူးတယ်၊ ဒါကတော့ စိတ်ရင်းအမှန်ပေါ့နော်
နောက်ချင်တာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပါ။
အမယ် သူက ဘလော့ကိုများ ဆက်ရေးဖြစ်ဦးမလား ဘာလားတဲ့ ဟွန်းးးးးး ရပ်ရဲရပ်ကြည့် တွေ့သွားမယ် ယမမင်းနားကို သွားတိုင်မှာ ဘလော့ကို ရပ်လိုက်လို့ကတော့ ၁၀၀ % ကို ဆင်းခိုင်းမှာနော့် ဟား ဟား အကိုရေ ပိုစ့်ကောင်းလေး တပုဒ်ပါ ဘာလိုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ကိုတော့ မရပ်ပါနဲ့လို့
ဆေးစွဲသလို စွဲနေတဲ့ ဘလောဂ့်ကို အသေအချာပဲ ဆက်ရေးအုန်းမှာပါ။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူတိုင်း တွေ့ကြုံရတဲ့
အရမ်းသဘောကျသွားတာပဲ ရယ်ရတယ် ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂ်လုပ်လို့ ငရဲကျမယ့်လူထက် ချက်ပြီးကျောသွားတဲ့လူတွေ ငရဲမြန်မြန်ကျပါစေ ငှဲငှဲ
ရင်တွင်း ခံစားချက် စာလေးလာဖတ်ပါတယ်ရှင်
မီးမလာ၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေ စာကောင်းပေသန့်လေးတွေကိုေ၇းပြီး ဘလော့ဂ်ဂင်းနေနိုင်တာကိုဘဲ ချီးကျုးလေးစားပါတယ်၊ ဘော်ဒါကြီးရေ....
ကိုယ့်ဘ၀အစစ်အမှန်၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းကို ဖော်ပြရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူး၊ တချို့တ၀ှက်ဟာ မသိသင့်မသိထိုက်တာတွေ စာဖတ်သူနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေရှိနေတာမို့လား၊ အဓိကက ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေဟာ စာဖတ်သူအပေါ်အဆိပ်အတောက်မဖြစ်မိစေဖို့က အဓိကဖြစ်ပြီး ကိုယ့်စာဖတ်ပြီး စာဖတ်သူ အတွက်တစုံတခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဘဲ စာရေးသူအတွက် ရော ဖတ်သူအတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်ကြပါတယ်၊ ဘော်ဒါကြီးရေးနေတဲ့ စာစုတွေက အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ စာကောင်းစာသန့်တွေဖြစ်ကြောင်း ယမမင်းကြီးဆီကို ထောက်ခံစာရေးပေးလိုက်ပါ့မယ်၊ ဟဲဟဲ.. နောက်တာနော်
သဘောကျတယ် ဒီပို့စ်ကို တစ်ကယ်ပဲ လူတွေက အလိမ်အညာများတယ်..
တစ်ချို့ဆိုလာလာအက်ပီးတော့ အကြောကြီးနဲ့ အကုန်မေးတယ်ပီးရင် နစ်ဘယ်ကရလဲမေး ကိုယ်လည်းမသိဘူးဆိုတာလာသေး....အနော်တို့ကပဲအက်သလိုလို
တစ်ကယ်ကို လန်ထွက်နေတဲ့ လူတွေ ... လူလိမ်လူညာတွေရှိသလို....အမှန်အတိုင်းပြောတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်...။ လိမ်နေကြတဲ့သူတွေကို တစ်ကယ်ကို သနားမိပါတယ် သူတို့ ဘယ်လိုမှကို အစစ်အမှန်ပြန်ရမယ် မထင်ဘူးလေ... သူတို့က လိမ်ထားမှတော့ သူတို့ကို အစစ်ပေးလဲ အစစ်ဘယ်ရမလဲနော်.......
သည်းမခံနိုင်ဆုံးက လာအက်ပီး pls asl ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲ ....အနော်တောင် ဒီလိမ်လည်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ပို့စ်ရေးဖူးသေးတယ်
အစစ်အမှန်ပေးလို့ အတည်တကျခံခဲ့ရဖူးတာတွေ ရှိတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ ....။ တစ်ချို့ကျတော့ ကိုဝင်းဇော်ပြောသလို ခင်မင်ဖော်ရွေမှုကို အသုံးချသွားကျတာ များပါတယ် ... ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာထက် သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှု၊ စေတနာနဲ့ အနုပညာကို အဓိကထားပြီး ကြည့်မိတယ်၊ ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါထက် ကိုပေးချင်တဲ့ အနုပညာ၊ ဖန်တီးမှုနဲ့ စေတနာကို သိစေချင်တယ် ... ကျွန်တော့် အမြင်ပေါ့ ... ။